वाम एकता र चिनियाँ छाता- विचार - कान्तिपुर समाचार
वाम एकता र चिनियाँ छाता
ड्रयागनको वर्तमान नेपाल नीति शिरलाई वशमा राखेर शरीरलाई अचेत पार्ने खालको छ ।
जेष्ठ ८, २०७५ कृष्ण पहाडी
काठमाडौँ — चीनको मानव अधिकार अवस्था र लोकतन्त्रबारे कुरा उठ्दा यो चीनको आन्तरिक मामिला हो भनी ठाउँ हेरी कतै चिनियाँहरू कड्किन्थे, कतै टक्टकिन्थे त कतै पन्छिन्थे । चीनको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको र अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा पनि चीनले हस्तक्षेप नगर्ने उक्ति बारम्बार दोहोर्‍याउँथे । अहिले घडीको सुई बदलिएको छ ।
अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले यस वर्ष पनि विभिन्न देशको मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रतिवेदन निकाल्यो । त्यसको प्रतिउत्तरमा चीनले पनि अमेरिकाको मानव अधिकार अवस्था शीर्षकमा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्‍यो । नेपालका राजनीतिक दलहरू कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नपार्ने उक्ति चिनियाँहरू भट्याउँथे । पछिल्लो चरणमा चीनले नेपालका वामपन्थीहरू मिलेको देख्न चाहेको त्यसमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुनुपर्छ/मिल्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको थियो । यस्तो आग्रह र मनोवैज्ञानिक दबाब पञ्चशील नीतिको विपरीत त भएन ? वा त्यसैको परिमार्जित स्वरूप हो ? यो नेपालको राजनीतिमा सामान्य चासो र शुभेच्छामात्र थियो वा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप, चीन सरकारले नै जानोस्, तर ड्रयागन (चीन) को नेपाल नीति बद्लिएको छ ।
चीनका शक्तिशाली नेता माओ जीवित छउन्जेल नेपालले माओबाट भयभित हुनुपरेन । तर दिवंगत माओको प्रेत अर्थात माओवाद र चेला–चपेटा अर्थात माओवादीहरूबाट भने नेपालले निकै दु:ख पायो । अहिले दुइटा टाउका मिलिसक्दा पनि माओवादका नाममा अर्को सानो टाउकोले वितण्डा गर्न छाडेको छैन, जसका मुखिया विप्लवको बारम्बार चीन भ्रमणबारे यसअघि नै लेखिसकिएको छ ।
सरसर्ती हेर्दा नागरिक स्तरमा नेपाल–चीनबीच न कुनै ठूलो तिक्तता देखिन्छ, न प्रगाढ मित्रता । यदाकदा तिक्तता बढ्ने प्रगाढ मित्रता हुँदामात्र हो । तिब्बत छुट्टै देशको रूपमा रहँदा नेपालसँग बाक्लो मित्रता थियो । साम्यवादी चीनले तिब्बतमाथि पूर्णरूपमा आधिपत्य जमाएपछि नेपालीहरूको तिब्बतसँगको व्यापार सुक्यो र कनेक्सन पनि लगभग टुट्यो । तिब्बतस्थित मानसरोवर हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल हो । नेपाली तीर्थयात्री र पर्यटकहरू विना भिसा निर्भयसाथ मानसरोवर यात्रा गर्थे । पछिल्लो कालखण्डमा चीनले नेपालीहरूलाई त्यो सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ । लाग्छ, चिनियाँ सत्तालाई धार्मिक आस्थाको स्पन्दनप्रति अझै एलर्जी छ । साम्यवादी धारा र सांस्कृतिक क्रान्तिको नारामा बगेपछि चीनमा धेरै वर्षसम्म मूर्तिहरू पुजिएनन्, अपितु मान्छे आफै जड मूर्तिजस्ता देखिए ।
नेपालका लागि चीनसँगको सौदाबाजी हाडे ओखर फोर्नु जत्तिकै साह्रो छ । बल्लतल्ल फुटायो, तैपनि गुदी कम, त्यसमा पनि आफ्नै दाँत भाँच्चिने डर । ड्रयागनको वर्तमान नेपाल नीति शीरलाई वशमा राखेर शरीरलाई अचेत पार्ने खालको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको पृष्ठभूमिमा यस्तै वशीकरणको भूमिका नकार्न सकिँदैन । भनिन्छ, पञ्चायतकालमा विभिन्न परियोजनामा कार्यरत चिनियाँहरू कुनै घटनाका कारण नेपाली प्रशासनसामु प्रस्तुत हुँदा नेपाली नोट निकाल्थे र उक्त नोटमा छापिएको राजाको तस्बीर देखाउँदै फुर्ती गर्थे । त्यो बेला राजतन्त्र अर्थात शासन सञ्चालनको टाउको, चिनियाँ सन्देश स्पष्ट थियो, नेपालको टाउकोसँग उनीहरूको विशेष सम्बन्ध छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि चिनियाँहरू टाउकोको खोजीमा कहिले यता भौंतारिए, कहिले उता । सायद त्यसैको परिणाम हुनसक्छ, एकताको पहल, चीनले नेपालमा अहिलेलाई एउटा होइन, दुईमुखे टाउको भेट्टाएको छ ।
आम नेपालीका लागि मुख्यभूमि चीनसम्म निर्वाध पहुँचको अवस्था अहिले पनि छैन । नेपाल आउने र व्यापार गर्ने कतिपय चिनियाँको आचरण पनि सहिष्णु नेपालीहरूका लागि पाच्य छैन । कुनै जिल्ला अदालतमा केही चिनियाँ नागरिकहरूमाथि मुद्दा चलिरहेको थियो । त्यस दौरान केही चिनियाँहरूबाट अदालत परिसरमा भएको गुन्डागर्दी सामान्य घटना थिएन । यसैगरी कुनै एउटा संस्थाको दर्ता खारेजी सम्बन्धी मुद्दामा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले सर्वोच्च अदालतलाई घुर्की वा दबाबस्वरूप लेखेको पत्र चिनियाँ कूटनीतिको विस्मयकारी पाटो थियो । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, ६ दशक अघिसम्म परम्परागत सीमारेखामा आधारित नेपाली नक्सामा सोलोडोलो सगरमाथा नेपालको सरहदभित्र देखिन्थ्यो, तर चीनलाई सगरमाथाको उत्तरी मोहडा नभई भएन ।
१ अर्ब ४१ करोड जनसंख्या भएको चीनमा ९१ प्रतिशत हान जाति रहेका छन् । सन् २००० तिर चीनको सहरी जनसंख्याको ४ प्रतिशतमात्र मध्यम वर्ग थियो, यो संख्या ह्वात्तै बढेर अहिले ४३ करोड नाघेको छ र सन् २०२० सम्ममा चिनियाँ मध्यम वर्गको संख्या ७८ करोड पुग्ने बताइन्छ । त्यसको १ प्रतिशतले मात्रै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र नेपालका रमणीय क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्ने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा कायापलट हुनेछ । स्मरणीय छ, अध्यागमनको अभिलेख अनुसार सन् २०१७ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरूको संख्या ९ लाख ४० हजार २ सय १८ थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी १ लाख ६० हजार भारतीय र १ लाख ४ हजारजति चिनियाँहरू थिए ।
चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको, आर्थिक रूपमा दोस्रो, क्षेत्रफल र सैन्य शक्तिमा तेस्रो शक्तिशाली राष्ट्र हो । अनेकौं उपलब्धिका बाबजुद विश्व रंगमञ्चमा चीनको नैतिक धरातल कमजोर छ, किनकि चीनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छैन । चीनसँग शक्ति छ, तर सहिष्णुता छैन । सन् २०१६ मा दलाई लामाले मंगोलिया भ्रमण गरेपछि रिसाएको चीनले छिमेकी मंगोलियामाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । १४ वटा देशसँग २२११७ किलोमिटर लामो भू–सीमा साझेदारी गर्ने चीनको कुनै बेला प्राय: सबै छिमेकीहरूसँग समस्या थियो ।
तर सन् १९९० पछि भने चीनले उल्लेख्य रूपमा छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुधार गरेको छ । तथापि केही विन्दुमा आज पनि स्थिति संवेदनशील छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा विवादकै कारण युद्ध भएको थियो । एकातिर अरुणाचल प्रदेशको कतिपय भूभागमा आज पनि चीनको दाबी छ भने भारत–पाकिस्तान तनावको फाइदा उठाउँदै चीनले कब्जा गरेको ‘अक्साइ चीन’ क्षेत्र काश्मीरको हिस्सा भएको भन्दै भारतको दाबा निरन्तर छ । सन् १९६९ मा सीमा विवादकै कारण चीन र तत्कालीन सोभियत संघबीच युद्ध भएको थियो । त्यही विवादको विरासत हुनुपर्छ, कजाकिस्तान, किर्घिस्तानसँग सीमा विवाद पूर्णरूपमा टुंगिएको छैन ।
यद्यपि रूससँग भने चीनको सम्बन्ध शीतयुद्धकालमा जस्तो चिसो छैन । हङकङमा जस्तै ताइवानमा पनि एक देश दुई व्यवस्थाको सूत्र चीनले अगाडि सारे पनि तेइसौं आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको ताइवान र दोस्रो आर्थिक शक्ति चीनबीच तनाव जारी छ । कुवेतमा भन्दा बढी तेल भण्डार रहेको भनिएको र शेष विश्वसम्म पुग्ने समुद्री मार्ग दक्षिण चीन सागरमा स्थिति विस्फोटक छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जल डमरु हो वा चिनियाँ स्वामित्वको क्षेत्र, विवाद निरूपणको सम्भावना तत्काल देखिँदैन । यसैगरी प्राकृतिक ग्यासको प्रचुरता रहेको पूर्वी चीन सागरको जल तथा हवाई क्षेत्रमा चीनको दाबा र जापानको चासोबीच मानवरहित टापुहरूलाई लिएर समेत विवाद निरन्तर छ । उत्तर कोरियाका कारण दक्षिण कोरिया र जापानको सुरक्षा संवेदनशीलता अनि चीन र उत्तर कोरियाको घनिष्टताले पूर्वी एसियामा त्रासदीको अर्को सिलसिला निरन्तर छ ।
नेपाल सन्दर्भमा चीनले जहिले पनि नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीहरूको गतिविधिले चीनको सुरक्षामा खतरा भएको बताउँदै आएको छ । नेपालमा १५ हजार र दलाई लामाले आश्रय लिएको भारतको धर्मशालामा ८० हजारको हाराहारीमा तिब्बती शरणार्थीहरू रहेको बताइन्छ । सन् १९५९ मा तिब्बतबाट दलाई लामाको पलायनपछि १९८९ सम्म नेपाल छिर्ने तिब्बतीहरूलाई नेपालले शरणार्थी मान्दै आएको थियो भने १९८९ मा कडा नीति अवलम्बन गर्दै सीमाबाटै फिर्ता पठाएको पनि देखिन्छ ।
सन् १९९० मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसीआर) सँग एक भद्र सहमति भएको पाइन्छ, जस अनुसार नेपाल छिरेका तिब्बतीहरूलाई नेपालस्थित युएनएचसीआर कार्यालयमा बुझाउने र त्यहाँबाट युएनएचसीआरले सुरक्षित तवरमा दलाई लामाको मुख्यालय धर्मशाला भारतसम्म पुर्‍याउने । चीनले तिब्बतलाई सैनिक छाउनीजस्तो बनाएको आरोप पश्चिमले लगाउँदै आएको छ । साथै पश्चिमले तिब्बती कार्डमार्फत चीनमा अस्थिरता प्रत्यारोपण गर्न खोजेको आरोप चीनले लगाउँदै आएको छ । यथार्थमा नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बतीहरूको हौवा देखाएर चीन सदैव अन्यत्र ध्यान मोड्न चाहन्छ र नेपालमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरी भारत सीमासम्म प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ भन्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ ।
भारतीय संस्थापनको अन्ध आवेग र मुर्खताका कारण विगतमा भारतसँग नेपालको तिक्तता बढेको हो । चीनले त्यो तिक्तताको जगमा टेकेर मित्रता सुदृढ गर्न खोज्नुभन्दा नेपालीहरूको मन जितेर नयाँ आयाम थाल्न सक्नुपर्छ । आधा शताब्दीअघि नेपाल–तिब्बत सीमा तातोपानीबाट काठमाडौंसम्मको ११५ किमि लामो अरनिको राजमार्ग निर्माण हुँदा उक्त सडक सँगसँगै साम्यवाद पनि नेपाल भित्रिन्छ भनेर भारतले कोकोहोलो मच्चाएको थियो । त्यसको आधा शताब्दीपछि तिब्बतबाट काठमाडौंसम्म रेल आइहाल्ने हो कि भनेर भारतले अनेकौं संशय पालेको देखिन्छ ।
नेपालमा वामपन्थीहरूको सरकार मोटर चढेर होइन, भोटरको ठप्पाबाटै बनेको हो । अझ वर्तमान सरकार चीनको नैतिक समर्थनभन्दा पनि भारतको अनैतिक आचरण प्रदर्शनका कारण अझ बलियो बन्न पुगेको हो । नेपालको हरेक क्षेत्रमा दखल अन्दाजी र दलहरूसँग भेदभावपूर्ण आचरणको गलत र अनुत्पादक नीतिका कारण भारतले भोग्नुपरेको दुर्दशाबाट चीनले पाठ सिक्ने हो वा त्यही मार्गमा अग्रसर हुनथालेको हो ? अहिले नै निक्र्योल गर्नु हतार हुनेछ । हालै एकीकृत नेकपा अन्डरलाइनका सन्दर्भमा चिनियाँ छाता ओढेर एकता भएको हो वा सत्ता केन्द्रित मानसिकता, गठबन्धनको बाध्यता वा आवश्यकताका कारण भएको हो, विस्तारै देखिँदै जानेछ । भारत परस्त र चीन विरोधी भन्ने ठप्पा लागेको सरकार अब नेपालमा टिक्न सक्दैन । त्यसैगरी चीनपरस्त र भारत विरोधी ठप्पा लागेको सरकार पनि नेपालमा टिक्दैन । त्यसो हुनगयो भने दुर्घटनाका अनेकौं सम्भावना सल्बलाउन सक्छन् ।
अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्दा चीनले तत्कालीन राजालाई कमिसनस्वरूप लाखौं रुपैयाँ नजराना दिएको चर्चा एकजना पूर्वमन्त्री तथा विख्यात कूटनीतिज्ञले बारम्बार गर्ने गर्थे र झन्डै २७ वर्षअघि यो पंक्तिकारले एउटा राष्ट्रिय साप्ताहिकमा प्रकाशित लेखमा उक्र प्रसंग उल्लेख गरेको थियो । २०६६ सालपछि माओवादीको तर्फबाट कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो टेप नै सार्वजनिक भएको थियो । नेपालका पूर्व राजादेखि रङ्कसम्म र नेतादेखि कर्मचारीसम्मको नाडी राम्ररी छामेको चीनले पर्दा पछाडिबाट गरिरहेको लगानीको लामो फेहरिस्त सार्वजनिक हुने हो भने थुप्रै ‘राष्ट्रवादी’ नेताहरू नाङ्गेझार हुन सक्छन् ।
विश्व शक्ति सन्तुलनमा चीनको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बढ्दो प्रभावलाई कसैले नकार्न सक्दैन । चीनसँग नेपालको कुनै तिक्तता छैन । नेपाल–चीन मित्रतामा चिरा पर्न नदिन चीन–भारत सम्बन्ध सुधार हुनु त्यति नै आवश्यक छ । चाहे पनि नचाहे पनि स्वीकार गर्नैपर्छ, दक्षिण एसियाको साँचो भारतको हातमा छ र यो पनि सत्य हो, एसियाको शान्तिको साँचो चीनको हातमा छ । यी दुई हातहरू मिल्दा विश्वमै शान्तिको सुमधुर ध्वनि गुञ्जिनेछ । यी हातहरू आपसमा भिडे र भाँचिए भने एसिया पक्षाघातले थलिनेछ । भारत र चीनलाई सके नजिक्याउन, नसके पनि हिमालयको काखमा लड्न नदिन र ‘द्वन्द्वरहित हिमालय’को दिशामा योगदान गर्न नेपालले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७५ ०८:१०
क्षमा अभ्यर्थना कि प्रवञ्चना
सीताको जन्मभूमि टेकेर फेरि पनि छलकपट भयो भने ‘मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा’ भन्ने कहावत नै मोदी डक्ट्रिन वा मोदीमन्त्रका रूपमा परिभाषित हुनेछ ।
वैशाख २८, २०७५ कृष्ण पहाडी
काठमाडौँ — भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमणको साइत वैशाख २८ गते जुरेको छ । मोदीका कठोर आलोचकहरूको आरोप छ, मोदी कामभन्दा कुरा बढी गर्छन्, अनि कहिलेकाहीं जे भन्छन्, काम ठ्याक्कै उल्टो गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गर्दा मोदीले चोक–चोकमा ओर्लिएर नेपालीसँग हात मिलाए, तर संविधान जारी भएपछि तिनै नेपालीको गालामा नाकाबन्दीको थप्पड हिर्काए ।
नेपालको संसद्मा भाषण गर्दा संविधान बनाउन ऋषि–मन चाहिने उपदेश दिए । तर जब संविधान बन्यो, क्रुद्ध ऋषि दुर्वासाको स्वरूपमा पो मोदी प्रकट भए र नेपालीमाथि जाइलागे । त्यो इतिहासको तितो अध्याय थियो, तसर्थ जति दोहोर्‍यायो, त्यति नै कोक्याउँछ । त्यो तितोलाई बिर्साउन अब मिठोको खाँचो छ, त्यस्तो मिठास शब्दमा होइन, व्यवहारमा छचल्किनुपर्छ । यस पटकको नेपाल भ्रमण मोदी स्वयंका लागि अपूर्व अवसर हो । त्यसका लागि मोदी आफैँले छाती फराकिलो गर्न सक्नुपर्छ ।
विगतको तिक्तताका लागि हात जोडेर क्षमायाचना गरे मोदीको उचाइ घट्ने होइन, अझ बढ्छ । त्यो संस्कार छैन भने केही उचनीच भएकोमा दु:ख व्यक्त गरे पुग्छ । क्षमा अभ्यर्थनाको त्यस्तो गुण मोदीमा छ–छैन, एक साताभित्रै थाहा हुनेछ । मोदी राग शब्दको खोक्रो आडम्बर मात्र हुनेछ वा सम्बन्धको रसिलो आयाम, थाहा पाउन केही दिन पर्खनैपर्छ । यसै पनि नागरिक स्तरमा नेपाल र भारतबीच अनेक कालखण्डमा विभिन्न धाराद्वारा सिञ्चित सम्बन्ध प्रगाढ छ, अनि आत्मीय एवं अनुपम पनि । मोदी हुन् वा ओली, कसैलाई पनि यो सम्बन्ध खलबल्याउने जनादेश दुवैतर्फका नागरिकले दिएका छैनन् । सक्ने भए सम्बन्धको यो रंगलाई अझ गाढा बनाऊ, सक्दैनौ भने पनि कमसेकम फिक्का बनाउने काम नगर । यही नै इतिहासको भाव हो, परिस्थितिको माग हो र दुवैतिरका आम नागरिकको आवाज हो ।
सन् १९५९ अगाडिसम्म भारत र चीनबीच युद्ध भएन, किनकि दुवैको बीचमा तिब्बत थियो । चीनले पूर्णरूपमा तिब्बत कब्जा गरेको ३ वर्षभित्रै चीन–भारतबीच युद्ध भयो । सुरक्षा स्वार्थलाई नै दृष्टिगत गरेर होला, भारतले तिब्बत स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई कतै देखिने कतै नदेखिनेगरी सक्ने सहयोग गरिरह्यो । चीन र भारतबीच नेपाल अवस्थित भएका कारण दुई भीमकाय मुलुकलाई जुध्न नदिन भौगोलिक रूपमै पनि नेपालको ठूलो योगदान छ । यथार्थमा भारत र चीनबीच नेपाल तगारो होइन, मित्रता र दुवैको सुरक्षाका लागि बलियो सेतु हो । तसर्थ शान्त, स्थिर र समृद्ध नेपालको उपस्थिति चीन र भारत दुवैको सुरक्षाका लागिसमेत अत्यावश्यक छ । यसका लागि चीन–भारत दुवैले नेपाललाई सघाउनुपर्ने हो ।
नेपालमा विद्यमान द्वन्द्वलाई चर्काउने होइन, समाधान गर्न योगदान गर्नुपर्ने हो । कुनै बेला साधनाको नाममा उत्तर भारतको पर्वतीय इलाकामा भाैंतारिएका मोदीलाई हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलताबारे राम्रो ज्ञान छ । तर यदाकदा त्यो ज्ञान पनि निस्तेज हुँदोरहेछ । २०७२ सालमा भारतले नेपालमा थोपरेको नाकाबन्दी चिनियाँ प्रभाव विस्तारका लागि लिस्नो बन्न पुग्यो । त्यसैको थकथकी अहिले भारतीय वृत्तमा देखिन्छ । यस पटकको नेपाल भ्रमण मोदीका लागि विवेक प्रदर्शन गर्ने अर्को अवसर हो । विगतका त्रुटिहरूप्रति क्षमा अभ्यर्थनाले विश्वासको नयाँ सेतु निर्माण हुनसक्छ । त्यसो हुनसकेन भने मोदीको यो भ्रमण पनि नियमित प्रवञ्चना मात्र हुनेछ । छलकपट र धोकाको शृङखला अब फेरि दोहोरिँदैन भन्ने पूर्ण विश्वास दिलाउन मोदीले भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शब्दको होइन, असल यत्नको खाँचो छ ।
नेपाल र भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्धबारे धेरै चर्चा हुने गरेको छ । तर यो सम्बन्ध केही कोणबाट आस्थाको त केही कोणबाट विश्वासको सम्बन्ध पनि रहेको छ । नागरिक स्तरमा यस्तो सम्बन्ध आज पनि कायम छ । तर सरकारी संयन्त्रका कारण त्यस्तो विश्वास बेलाबखत खण्डित भएको छ । २०७२ सालमा मोदी नेतृत्वको सरकारका कारण त्यस्तो सम्बन्धमा चिरामात्र परेन, धाँजा पनि फाट्यो, जुन सबैभन्दा ठूलो अनर्थ थियो । तथापि भारतभित्रै नागरिक स्तरबाट त्यो अनर्थको विरोध भएको थियो । नाकाबन्दीको विरोधमा काठमाडौँमा शान्ति समाजद्वारा आयोजित तीनवटा प्रदर्शनबाट यो पंक्तिकारसहित दर्जनौं अधिकारकर्मीहरू पक्राउ परेको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा समेत छ्यापछ्याप्ती प्रकाशित भएको थियो ।
भारतमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र स्वयं मोदीको राजनीतिक जीवनमा धार्मिक आयाम जोडिएकोले होला, मोदीको अभिव्यक्तिमा पनि त्यसको प्रतिविम्ब देखिन्छ । तर अब शिव सर्किटको कुरा गर्दा पशुपतिनाथ र काशी विश्वनाथसम्म मात्र होइन, काठमाडाैंबाट मुम्बई हुँदै नासिक त्रयम्वकेश्वरसम्म जोड्ने योजना सार्वजनिक गरे हुन्छ । राम–सीता सर्किटको कुरा गर्दा जनकपुरबाट अयोध्यासम्म मात्र होइन, रामेश्वरमसम्मको विस्तारित योजना अघि सारे हुन्छ । बुद्ध सर्किटको कुरा गर्दा नेपाल र भारतबीच मात्र किन, दक्षिणमा श्रीलंका र पूर्वमा बर्मासम्मको विस्तारित परियोजनालाई मूर्तरूप दिए हुन्छ । मुक्तिनाथ, लुम्बिनी हँुदै बोधगया, कुशिनगर र कोलम्बोसम्म फैलने त्यस्तो सर्किटमा ढिलो–चाँडो चीन अवश्य जोडिनेछ, जुन सर्किटको हव अर्थात केन्द्र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हुनेछ ।
आर्थिक करिडोरको कुरा गर्दा विराटनगरदेखि मोदीकै गृहराज्य गुजरातको अहमदावादसम्म आर्थिक सर्किटको र बारा–पर्सादेखि दिल्लीसम्म औद्योगिक सर्किटको योजना अघि सार्दा हुन्छ । रेल सर्किटको कुरा गर्दा रक्सौल–काठमाडौँमात्र किन, रक्सौल–काँकडभिट्टा र रक्सौल–कञ्चनपुरसम्मको परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिए हुन्छ । हवाई सर्किटको कुरा गर्दा नेपालको हकमा आकाशजस्तै विशाल ह्दय भारतको हुनुपर्ने हो, तर हवाई क्षेत्र (एयर स्पेस) बारे भारतको गोलमटोल व्यवहारले शंका बढाउने नै काम गरेको छ ।
जल परिवहनको कुरा गर्दा बंगालको खाडीदेखि गंगा हुँदै नारायणी, कर्णाली र कोशीसम्म चल्ने जल सर्किटको योजना अघि सारे हुन्छ । तर नदी जोड्ने कुरा गर्नु अगाडि कमसेकम मन जोड्ने काम हुनुपर्छ । भारतको सुरक्षाका खातिर आज पनि भारतीय सेनामा नेपालीहरू कार्यरत छन्, तर नेपालीहरूले भारतका कतिपय अस्पतालमा उपचार गराउँदा भारतीयले भन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान किन ? पुनर्विचार गर्नुपर्छ । तिनै नेपालीहरू नेपाल फर्कंदा सिमानामा भारतीय प्रहरीहरूबाट किन लुटिन्छन् ? भारतीय सत्ताले यसको जवाफ दिनुपर्छ । नेपाली व्यापारीहरूले भारतको लालफिताशाही कर्मचारीतन्त्रबाट पाएको कष्ट र हन्डर कहिले अन्त्य हुन्छ ? समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाललाई कक्र्याउन होइन, फक्रिन दिन भारत नीति प्रतिपादन हुनुपर्ने हो । जनसंख्या, क्षेत्रफल दुवै दृष्टिले भारत नेपालभन्दा कैयौं गुणा ठूलो देश हो । तर पनि किन हो, भारतले बेला–बेला नेपाली सीमा मिच्ने, अतिक्रमण गरी छुस्के चरित्र र सानो चित्तको प्रदर्शन गर्ने गर्छ । यस्तो आचरण नदोहोरिने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
भारतमा आधा अर्ब जनसंख्या बसोबास गर्ने नेपाल सिमान्त उत्तर प्रदेश, बंगाल र विहारमा आज पनि भीषण ऊर्जा संकट छ, जसका कारण पश्चिम र दक्षिण भारतको तुलनामा यी क्षेत्रहरू अविकसित छन् । त्यो संकट हल गर्न ऊर्जा सर्किटको योजना तीव्र बनाउनु भारतकै लागि अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि नेपालमा उत्पादन भई निर्यात हुने बिजुली कुन देशको कम्पनीले निर्माण गरेको हो भनेर छुट्याउने र छुवाछूत गर्ने मानसिकता भारतले त्याग्नुपर्छ ।
बितेको तीन दशकमा भारत र चीनले थुप्रै क्षेत्रमा फड्को मारेका छन् । अर्को तीन दशक यी देशहरू आपसमा नजुध्ने र युद्धमा नफँस्ने हो भने अझै धेरै फड्को मार्ने र ठूलो आर्थिक शक्ति बन्ने निश्चित छ । समृद्ध र विकसित छिमेकीहरूको सान्निध्यले नेपाल स्वयं पनि लाभान्वित हुनेछ । सामरिक दृष्टिका अतिरिक्त जलस्रोत, पर्यटन र जनशक्तिका हिसाबले नेपालको महत्त्व दुवै छिमेकीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । नेपाल भनेको यस्तो बियाड हो, जहाँ छरिने द्वन्द्वको विउलाई छिमेकमा ‘कलम’ वा प्रत्यारोपण गरिन्छ कि भन्ने त्रास पनि दुवै छिमेकीमा व्याप्त छ ।
नेपालमा चीनको विस्तारित भूमिका र बढ्दो प्रभावले भारत केही अत्तालिएको छ । बिरालोलाई पनि झ्यालढोका थुनेर चुट्न थालेपछि घाँटी न्याक्न सक्छ भन्ने हेक्का मोदीले पहिले नै राखेको भए सायद आज यतिविघ्न अत्तालिनुपर्ने थिएन । तर विगतबाट पाठ नसिक्ने हो भने भारतले अझ धेरै अत्तालिनुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ । तथापि नेपालीहरू चीनको हौवा देखाएर भारतसँग सौदाबाजी गर्न चाहँदैनन्, मात्र नेपालको स्वाभिमानप्रति भारतको अटल सम्मान तथा सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपेक्षा गर्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू कसैलाई चेप्ने र कसैलाई खेद्ने काममा भारत संलग्न हुनुहुँदैन । संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपालको कुनै क्षेत्रलाई भडकाउने काम भारतले बिर्सेर पनि गर्नु हुँदैन । मोदीले जे कुरा जनकपुरमा गर्ने हो, त्यही कुरा मुक्तिनाथमा पनि भन्नुपर्छ । जनकपुरबाट सुरु हुने यात्रामा मोदीले सद्भावको पक्षमा र घृणा र विखण्डनको विपक्षमा बलियो सन्देश प्रवाहित गर्नसके भने त्यो सुखद सुरुवात हुनेछ । तर सीताको जन्मभूमि टेकेर फेरि पनि छलकपट भयो भने ‘मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा’ भन्ने कहावत नै मोदी डक्ट्रिन वा मोदीमन्त्रका रूपमा परिभाषित हुनेछ । आशा गरौं, त्यो हुने छैन ।
सन् २०१४ अगस्टमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलोपटक नेपाल आउँदा मोदीले सुपर हिरोजस्तो धेरै नेपालीको मन जितेका थिए । त्यही वर्ष नोभेम्बरमा सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आउँदा पनि मोदीको छवि हिरोकै जस्तो रह्यो । तर नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी थोपरेका कारण हिरोबाट जिरो हुँदै मोदी भिलेन बन्नपुगे । यस पटक मोदीको छवि कस्तो हुने हो, हेर्न बाँकी छ । मोदीको ‘मिसन छिमेक यात्रा’ एक वर्षपछि भारतमा हुने लोकसभा निर्वाचनलाई दृष्टिगोचर गरेर भइरहेको हुँदा नेपालीका लागि यो भ्रमण ‘हात्ती आयो फुस्सा’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनसक्छ । पुराना घोषणा नवीकरण गरेर नयाँ प्रचारबाजी सहित यो भ्रमणको समापन हुनसक्छ ।
मोदीले अब भाषणमा बुद्धको नाम लिएर मात्र पुग्दैन, ह्दयको सिंहासनमा बुद्धलाई बसाउन सक्नुपर्छ । नेपाल र नेपालीको मन जित्न धेरै केही गर्नु पर्दैन, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौसत्ताप्रति शंकारहित अर्चना प्रकट गरे पुग्छ । भारतले महात्मा गान्धीलाई नोटमा देखाएर मात्र हुँदैन, अहिंसात्मक जीवनधारालाई सर्वत्र आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।
महात्मा गान्धीका अनुसार सत्याग्रहीले डरलाई सदाका लागि विदा गर्छन् र विरोधीसँग विश्वास गर्न पनि डराउँदैनन् । यदि बीसपटक विश्वासघात भएको छ भने पनि सत्याग्रही एक्काइसांैपटक पनि विरोधीमाथि विश्वास गर्न तयार रहन्छन्, किनकि सत्याग्रहीको आफ्नो नाउ विश्वासबाटै चल्छ । नेपाली जनता सत्याग्रही जस्तै छन् । भारतीय सत्ताले २० पटक
धोका दिए पनि २१ औँ पटकसमेत विश्वास गर्न नेपाली तयार छन् । तर कहिले नेपालको सार्वभौमसत्तामा धावा बोल्नेगरी, कहिले नेपालको स्थिरतामा प्रहार गर्नेगरी भारतले प्रदर्शन गर्ने गरेको अशोभनीय आचरण अनि निरन्तर अस्थिरता सिर्जना गरेर आफू निर्णायक बन्न खोज्ने मानसिकता सदासदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । आशा गराैं, नेपालीले २१ औंपटक पनि यही प्रवञ्चना दोहोरिएको दु:खद अनुभूति गर्नु नपरोस् । क्षमा अभ्यर्थनाबाट नयाँ सिँढी उक्लनसके मोदी भ्रमण सफल मानिनेछ ।
प्रकाशित : वैशाख २८, २०७५ ०८:११